Asham Tube Webview Telegram
Channel: Asham Tube
Akkam bultan jallatamtoota fi
Keenya harraaf jachoota barsiisoo
Hayyoota addunyaa is in affeera.
JOIN 👉 @jifaempire
Left jechuun duratti
Any comments👉 @binlawi
7.2K viewsedited 04:08
"Gammachuuf gaddi harkuma
Abbaa san jirti.Gammachuufis
gaddaafis murteessaan abbuma"
7.0K viewsedited 11:41
Mucaan maalta'e jattanmo akkam!
Eeyyeen!jattanii jirtu. Maarree harra
Gargala kutaan dhumaa asoosama
"Aadamiif caaltu" itti fufa!
At today night 2:30
6.8K viewsedited 13:04
(✍Yosan ganda jifar)
An caaltuun kee osoo onnee daran na dhiigduu obsaan of jabeessee kan sigatee kuteef sababa jaalala Lee turfachuu lubbuun siwaliin ce'uu abdiifi hawwii guddaa qabuufidha.
Qaalii kiyya guyyaa san akka harraatti sammuu kiyya keessatti deddeebi'aa onnee na urgufaa qaamni na hoollataa cinaa kiyya foxoqsaa jilajilaan qaama kiyya duguugee holatti nanaqe. Osoman ilaaluu qaamni kiyya akka shaamaatti babbaqee gadi lola'e.
Guyyaa San namtichi siin walitti jaalalaan hidhamuu kiyyaan duratti na jaallatuu fi na rakkisaa turetu ture.guyyaa halkan hirriba na dhirkee hogguu ba'u karaarratti na'eegee na kadhata ture. Altokko tokkos na sossodhaachisas tire.
Guyyaa tokko osoon mi'a bitachuuf gabaatti imaluu dugda duuba kiyyaan na tuttuqe hugguun garagalu is a ture. Ijji isaa diimatee barbareen gita ta'e.akka dinaatti ildiimmaan dhaabbi laaffisee jachoota jajjaboo furguuggachuu eegale.
"Amma booda sikadhachuuf si abdataa bara taruuf obsa hinqabu.abbaa manaakee dhiistee garakiyya akka dhuftuufis yaaliin kiyya laayyoo hin turre. Amma garuu obsis abdiin kiyyas cixarratti argamti. Jadhe ija natti babaasaa sagalee olfuudhee.
Jaalleen kee lubbuun turee ijaan arguu yoo feete hanga waggaa sadiitti dhiisiinii deemi hangasitti yoo si'eeggate sijaallata jachuudha. Anillee gaafas jireenya kee addaanis hinseenu jadhee
Anillee lubbuun siturfachuuf qalbiifi ija kiyyaan sihordofaa ija kee duraa maqe.qaalii kiyya hangs arraatitti takkumaa gochaaf oolmaa kee hordofuu irraa dadhabee hinbeeku. Oolmaaf bultumnikoo hordoffii kootiin hariiroo qabu ture.
Qaalii tiyya Adam jaalallee ta'uu kiyyatte gammadeera . dhugaadha ati dhuguma qaaliidha." Jattee xalayaa ishii goolabde lubbuun kiyya soorata addaa sooratte. Gammachuufi gaddi walitti na makamte.ijjii kiyya yogguu gara balbaka mooratitti acci darbamtuu jaalleen kiyya baraa alarra dhaabatti.
Amanuuf narakkise jismiin kiyya na hoollate manaama natti fakkaate tarkaanfachuuf yaalullee miilli kiyya soc naaf socho'uuf hin eyyemne ture.
Caalruun kiyya qaaliin dhuftee natti maratti yeroo dheeraam Sega boonyeen booda ija ishi IJA kiyyaan bara dheeraan booda wa simsiifne jechuudha.
Hordoftoota channel kiyya
Jaalalli obsa feeti
Jaalalli dhugaa dandammii
Cinqeellee ifgubbaarratti baatti.
7.6K viewsedited 04:30
"Aadaan aadaadhuma yoo
Eenyuu dagatee irraa goree
Golatti naquuf tattafatellee!"
Turkiis tahu jarman!
7.3K viewsedited 06:07
Golli keessan miiijuu
Alli keessan qajeelaa
Keessi keessan nagayaan
Faayee miidhagaan soree
Joorarraa baraara bahee
Qalbiin keessaniis horee
Karaan keessan hundumtuu
Goga offolee jiidhee😍
7.7K views 04:40
Hardoftoota chaanaalii keenyaa
Turtiin keessan haa badhaadhu
Jachaa sagantaa dorgommiitu
Itti aanuun isiniif dhihaata!
Dorgommichi namoota lama
lama Jidduutti gaggeeffama.
Dhumarratti namoonni dorgommii
Injifatan ni badhaafamu!
7.8K viewsedited 05:09
Hardoftoota chaanaalii keenyaa Turtiin keessan haa badhaadhu Jachaa sagantaa dorgommiitu Itti aanuun isiniif dhihaata! Dorgommichi namoota lama lama Jidduutti gaggeeffama. Dhumarratti namoonni dorgommii Injifatan ni badhaafamu! galmaa'uuf👉 @binlawi #share_godhaa…
👆Yeroo galmee xumuramaa jira
Waan ta'eef daddafaa galma'aa.
7.9K views 21:22
Dorgomtoonni keenya dorgommiin
Harraa dorgommii "challenge" irratti
Xiyyeeffatu ta'ee kan qoosaa walitti
Qoosuun irra bashannansiisuu irratti
Dha kan xiyyeeffatu.
Challenge keenya harraa
"Short$long challenge" dha.
Harra galgala sa'aa 2 irratti
Asitri ergitu👉 @binlawi
Rakkoo muraasa namudateen
Miidiyaarraa guyyoottan muraasaa
Baden ture harra deebi'een jira.
Boohaartiin Kenya ittuma fufa😍
7.7K views 05:59
Hayyee hayyee challenge
Keenya jalqabamee jira😊
Daqiiqaa muraasa booda
Ni jalqabu bohaaraa haa
7.3K viewsedited 16:48
#Long $ #Short_Challenges
Ani dheeradha ...mtra
Yoon barbaade asi gadin
ilaala Yoon deemu isan
si'a tokko ejjedhu..si'a sadii
Comment here👉 @binlawi
7.5K views 16:58
Ani wanti nayaaddeessu
Suuraa nama dheeraa yoon
Fb irratti ilaalu see more isa
Jadhuu tuquu koodha😂
7.6K views 17:03
Taariku abarraa (Long)
Wal natti fakkatu. Lachuu
7.6K viewsedited 18:23
Dhagaan bishaan keessaa
Yeroo baayyee nama gabaabaa
baajaajii biraa hin dhabdu..🤣
8.1K views 19:23
Namni dheeraan gaafa
dulloome Gaala ba'aan
Osoo dhidhiibame illee
8.8K viewsedited 19:40
Nama gabaabaa gadi
jedhii hin gaafatan Wal
bira waan ta'eef😁
Shammarran gaafa arrabsan
....kan indaqqoon lafa dhaabattee
mataa dhahattu ittin jedhu🤣
10.3K views 19:52
Forwarded from Imran Tahir
Gararreen gaara guddaa
Gurmuutti kan fe'amee
Lafeef lafa adda maku
Jalli tuullaa booralee
Miila dhaabbi kan daaku
Inni gubbaa baatamuuf
Miillii ittiin dhaabbatanu
Yooniif walgituu baate
Ba'aa miti balaadha
Yoo millii lafeen cabaa
Cabaaf tiratee kaate
5.9K views 05:43
Asham Tube pinned a photo
Sirni eebba kitaaba obboleessa Keenya Abdussamad saaliloo seenaa eegamaa rabbii (s.a.w ) irratti xiyyeeffate "GOOTA GOOTOTAA " jedhu sadaasa 06 / 03 / 2013 ,bakka hayyoonni ciccimoo fi keessummoonni gurguddoon argamanitti,galma odaatti,sa'aatii 2:30 irraa kaasee sirna ho'aa ta'een ni gaggeeffama !
Kanaafuu sagantaa kana irratti hirmaachuun bashannanaa barachuun cinaatti , amantaa keenyaaf akka gumaachinu kabaja guddaan affeeramtanii jirtu.
Teessoon : galma odaa ( fuldura hoteela laaloo )
Sa'aatiin : 2:30
Barreessaan kitaabichaa: Abdussamad saaliloo
5.7K views 18:09